Siyaasi kale oo ka goostay maamulka Somaliland (Xagee kusii jeedaa?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Siyaasiga Fu’ad Aadan Cadde oo kasoo jeeda gobollada Sool iyo Sanaag, islamarkaana ka tirsanaan maamulka Somalilnad la magacbaxay tan iyo markii la dhisay ayaa la sheegay inuu ka carooday maamulkaas, islamarkaana ka goostay.
Fu’aad Aadan Cadde, oo ahaa La taliyaha Gobolada Bariga Somaliland ayaa la sheegay inuu Somaliland ka goostay, islamarkaana u sii jeedo dhinaca Puntland oo uu uga sii horeeyay Siyaasi Axmed Cabdi Xaabsade oo lataliye u ahaa Madaxweyne Siilaanyo.
Wararka laga helayo Fu’aad Aadan Cadde ayaa sheegaya inuu ku sugan yahay Degmada Xudun oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo, halkaasi oo uu ku sugayo Qoyskiisa oo Hargeysa kaga dambeeyay. waxa uu Somaliland ku sugnaa 23-kii sano ee ay Jirtay.
Qaar ka mid ah warbaahinta deegaanada Somaliland ayuu Fu’ad Aadan Cadde u sheegay inuusan ka hadlayn halka uu ku jeedo. Waxa uu ka gaabsaday inuu Somaliland ka goostay iyo inkale isagoo hadalkiisa ku koobay in arintaasi aanu wakhtigan ka hadlayn, haddana uu ku sugan yahay Xudun oo uu sheegay inuu hawlo shaqo u joogo.
Fu’aad Aadan Cadde ayaa mudo hore sheegay inaanay jirin wax hawl ah oo uu ka qabto Xukumadda Madaxweyne Siilaanyo, isaga iyo Lataliyeyaal badana ay mushaharka uun iska qaataan. Waxa uu sheegay inaanay jirin Talo madaxweyne Siilaanyo waydiiyo.
Wararka laga helayo Somaliland ayaa sheegaya in Fu’aad Aadan Cadde ka careysan yahay howlo shidaal looga baarayo deegaanada uu kazoo jeedo, iyadoo arrintaas sida la leeyahay aysan isaga ku tixgelin xukuumadda Siilaanyo.
Wararka ayaa sheegaya in shirkaddaasi oo lagu magacaabo DNO shalay galab shaqaalaheeda ay rasaaseeyeen maleeshiyo beeleed ka careysan qaabka shidaalka looga baarayo dhulkooda, qorshahaas oo uu wato maamulka uu hogaamiyo Axmed Siilaanyo.
Siyaasiga Axmed Cabdi Xaabsade oo horay maamulka Somaliland ugu gacansiiyey iney gacanta ku dhigaan magaalada Laas-caanood ayaa 9-kii bishaan ka goostay Somaliland, isagoo tegay degmada Galdogob, kadibna 10-kii bishaan tegay magaalada Garowe ee xarrunta maamulka Puntlnad.
Xaabsade ayaa isagana la sheegay inuu ka carooday in maamulka Siilaanyo kala tashan waayey qorshayaasha gobolka Sool, wuxuuna markii uu tegay Garowe sheegay inuu ugu laabtay Puntlnad si uu u dhiso dhulkiisa asalka ah sida uu yiri.